अनलाइन परीक्षणको शुरुआतसँगै नेप्सेमा सुधार, ५.२३ अङ्क बढ्यो | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर अनलाइन परीक्षणको शुरुआतसँगै नेप्सेमा सुधार, ५.२३ अङ्क बढ्यो
मुख्य खबर, लगानी 151 views
अनलाइन परीक्षणको शुरुआतसँगै नेप्सेमा सुधार, ५.२३ अङ्क बढ्यो
जेठ ३१, काठमाडौं । साताको अन्तिमा दिन तथा जेठ महीनाको अन्तिम दिन नेप्से बढेर बन्द भएको छ । कारोबार शुरु भएदेखि बढेको बजार अन्त्यसम्म बढेर बन्द भएको छ । यस दिन १ हजार २ सय ४२ दशमलव शून्य ६ विन्दुबाट शुरु भएको बजार एक घण्टामा बढेर १ हजार २ सय ५१ विन्दुमा पुगेको थियो । सो विन्दुबाट ओरालो लागेर दोस्रो घण्टामा १ हजार २ सय ४३ विन्दुमा स्थिर भएको नेप्से पुनः उकालो लागेको हो । कारोबार भएको साढे तीन घण्टामा १ हजार २ सय ५२ विन्दुमा पुगेको बजार थोरै तल गएर अन्त्यमा ५ दशमलव २३ अङ्क बढेर १ हजार २ सय ४७ दशमलव ३० विन्दुमा पुगेको छ ।
पाँच ओटा ब्रोकर कम्पनीमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अनलाइन कारोबार परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । जेठ मसान्तभित्र सबै तयारी पूरा गरी परीक्षण गर्ने काम शुरु भएको छ । परीक्षण सफल भएपछि छिटै अनलाइन कारोबार गर्न पाउने आशाले पनि बजार बढेको लगानीकर्ता बताउँछन् ।
कारोबार भएका नौ समूहको परिसूचकमा बीमा समूहको परिसूचक बोहक बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक २ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ भने जलविद्युत् र होटल समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । १ सय ६५ कम्पनीको ४ हजार ७ सय ५६ पटकको व्यापारमा ९ लाख १२ हजार ७ सय ५० कित्ता शेयरको रू. ३१ करोड ८२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
नेप्सेमा सर्वाधिक शेयर कारोबार हुने १० कम्पनीमा प्रभु बैङ्कको संंस्थापक तर्फको शेयर प्रतिकित्ता रू. १ सय ६० मा रू. १ करोड ९५ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । उन्नती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । साथै, राधि विद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८५ प्रतिशत र नेपाल हाइड्रो डेभलपरको ९ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, जेविल्स फाइनान्सको शेयर मूल्य ३ दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ ।
एमबीए, एमबीएस, बीबीए, बीबीएस, बीएचएम र पब्लिकतर्फ देशभरका उत्कृष्ट १० कलेजहरु
९ असार २०७५, शनिबार १५:३९